Ku Saabsan Us-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Maadama cilmi baadhe xirfadle ah, soo-saare iyo kaydiyaha, Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Limited waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn soosaarayaasha koofiyadaha alxanka ee Shiinaha. Waxaan ku firfircoon nahay bixinta alaabada ilaalinta indhaha ee howlaha alxanka, oo ay ku jiraan muraayadaha alxanka, koofiyadaha alxanka oo hadhsan, mashiinka hawada nadiifiya iyo qalabka rakiba.
Iyada oo la adeegsanayo daraasad cilmi baaris oo sareysa, soo saarista iyo aaladaha tijaabinta, shirkadeena waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horeeya ee wax ka barta kuna soo saara wax soo saarka dalkeena. Waxaan ku adkeysaneynaa hal abuurka sayniska iyo tikniyoolajiyada iyo baaritaan madax banaan iyo horumar. 20% shaqaalaha shirkaddayada waa farsamoyaqaanno, kuwaasoo ah koox farsamo oo lagu faani karo. Alaabooyinkayadu waxay gaareen heer caalami ah oo horumarsan.
Shirkaddayadu waxay higsaneysaa hal abuurnimo joogto ah iyo iskaashi guul leh oo ay la yeeshaan macaamiisha. Waa inaanu bixinaa alaabooyin iyo adeegyo heer sare ah daacadnimo iyo xamaasad weyn.
Koofiyadda MX-9 Gawaarida Dabaalista Tooshka leh ee hillaaca leh
Aaminaadaadu waa awoodayada ugu weyn ee horumarka, fadlan nagu aamin boqolkiiba boqol.
Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd., oo ku taal Nantong City, Gobolka Jiangsu, waa shirkad cilmi-teknolojiyadeed ah, oo ku takhasustay horumarinta, soo saarista, iyo iibinta alaabada elektiroonigga ah. Waxyaabaha ugu waaweyn: waji-gudubka alwaax-guduudka ah, qalabka, shay-goyska, qalabka istciminta iyo qalabka ku habboon iyo wixii la mid ah.
La aasaasay 2012
In kayar 5 Qof
0% Jawaabta Degdegga ah
3000 - mitir laba jibaaran
Bandhig Faneedka 1
SIDII AAD U SAMEEYSAAN SARIIRADA